Wadamada Yurub oo laga dhaqan galinayo go’aan lagu mamnuucayo foorida – SBC
Wadamada Yurub oo laga dhaqan galinayo go’aan lagu mamnuucayo foorida
Baarlamanka Midowga Yurub ayaa isla meel dhigay hindise lagu doonayo in lagu mamnuuco nooc kasta oo ka mid ah gaboodfalada aan loo baahneyn ee lagula kaco haweenka, iyadoo taasi ka mid ah tahay mid af ama adin ah.
18 wadan oo ka mid ah qaarada Yurub ayaa qalinka ku duugay mucaahadadan cusub oo lagu doonayo in meesha looga saaro tacadiyo af iyo adin ah oo haweenka soo gaara kuwaasi oo lala xiriiray xaalad la mid ah kufsiga haweenka.
Hindisahan cusub ayaa waxaa la filayaa inay arimaha la aamisan yahay inay haweenka ku yihiin tacadi lagu daro foorida inta badan raggu ku faduuliyaan haweenka xiliyada ay wadooyinka marayaan taasi oo loola jeedo in laga dhigo mid dambi ah hadii haweeney socota aad foori la daba kacdo ama aad isku daydo inaad ku soo jeediso.
Laakiin khilaaf ba’an ayaa arintan durbada hareeyey ka dib markii Ra’isalwasaaraha UK David Cameron uu shacabka dalkiisa gaar ahaan ragga niyada uu ugu dajiyey in UK aanay
“Waxaynu leenahay sharci ku aadan xadgudubyada oo ka jira wadankan, mana doonayno inaan ka dhigno dambi in la foorida” ayuu yiri David Cameron oo ka hadlayay qorshahan cusub ee Midowga Yurub ay wadaan.
Cajiiiib waa hindiso fiican kkkk hablihii baa wadooyinka ka mari waayey ciyaal fay cali walee qanuunka somalia ayaa u baahan